मधेसलाई नेपालसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन : सीके लाल | Ratopati
personनरेश ज्ञवाली exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १९, २०७४ chat_bubble_outline5
भारतको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका स्तम्भकार तथा टिप्पणीकार सिके लालले आफ्नो औपचारिक पढाइको क्षेत्रमा भन्दा समाजविज्ञानको क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन् । ०४६ यताबाट उनी नियमित स्तम्भ लेख्ने तथा राजनीतिक टिप्पणी गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसैबीच उनका ह्युमन राइट्स गभर्नेन्स एन्ड डेमोक्रेसी इन साउथ एसिया, नेपालीय हुनलाई र मिथिला मन्थन प्रकाशित भइसकेका छन् । सिके लालसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
धोती लगाएको कालो वर्णको मान्छे देख्ने बित्तिकै यो भारततिरको हो कि भन्ने कुरा मेरो मानसिकतामा किन आउँछ ?
मानिसको सोच पाँचवटा कुराबाट निर्देशित हुन्छ । पहिलो, हामीले जानी नजानी आफ्नो आमा–बुबाको, समाजको र जुन परिवारमा बस्छौँ, तीनका मूल्य, मान्यता ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ । दोस्रो, पाहाडबाट मधेस झर्ने भनेकै मूलतः भारत जानका लागि हो । उनीहरूलाई कहाँबाट मधेसको सिमाना टुङ्गिन्छ र कहाँबाट हिन्दुस्तानको सिमाना सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कहिलै स्पष्ट भएन । त्यहाँका मानिसको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति उस्तै लागेका कारणले पनि त्यो प्रष्ट नभएको होला । तेस्रो, भारतीय पक्षबाट मधेसी भनेका भारतीय मूलका हुन् भनेर ठूलै हौवा पिटिएको छ । जुन हौवा मानिसलाई अहिले पनि सही नै लाग्छ । भारतीयले त्यो हौवा पिटिदिँदा यताको पूर्वाग्रह झन् बलियो हुन गयो ।
चौथो, काठमाडौँ उपत्यकालाई पृथ्वीनाराण शाहको पालादेखि ‘जफत किल्ला’ मानी आइएको हो । त्यसैले सबैलाई काठमाडौँ आउन राहदानी लिन लगाइयो । त्यो राहदानीलाई राणाकालभरी प्रचार गरियो । १०४ वर्षसम्म कुनै कुरा प्रचलनमा रहने हो भने त्यसले कस्तो मनस्थितिको निर्माण गर्छ बुझ्न गरो छैन । पाँचौँ, अहिले त होइन तर पहिले मधेसमा साक्षरता तुलनात्मक रूपमा बढी थियो । तिनले नाप, तौल जानेका थिए । व्यापार गर्थे । अनि यिनले ठग्छन् भन्ने भावना जानीबुझी बिस्तार गरियो । यस्ता सबै कुराले पाहाडिया मानसिकतामा मधेसी भनेको भारतीय हो, उनीहरू फरक होइनन् भन्ने भावनाको विकास गराउँछ ।
यस्तो धारणामा एकप्रकारले सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न नभएको होइन । माओवादी नेता मातृका यादवले ‘गर्व से कहु हम मधेसी छी’ भने र काठमाडौँको भित्ता–भित्तमा लेखे । त्यसले परिवर्तन होला जस्तो देखिएको थियो तर दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि पुरानो शक्तिले सत्तामा पुनः कब्जा जमायो । पुरानो शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछि अब मधेसीहरूलाई सियोको टुप्पो जति पनि ठाउँ छोड्नु हुँदैन भन्नेमा उनीहरू पुगे र अहिलेको पश्चगामी संविधान लागू भयो ।
राज्यको नीतिबाटै मधेसमा बस्नेहरूप्रति एकखाले धारणा विकास गराइयो र यसमा भारतीय हौवाले ठूलो काम गर्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष ?
सबै भावनामा डर र लोभको स्थान प्रमुख हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ । नेपालका सत्ताधारीको डर के हो भने दक्षिणले हामीलाई मिच्छ । र, लोभ के हो भने त्यसलाई रोक्न सकियो भने हाम्रो एकाधिकार कायम रहन्छ । यही कुरालाई नेपालका सत्ताधारीहरूले जनतामा बेचे । भारतको सत्तालाई लोभ के हो भने हामीले मधेसीलाई भारतीय मूलका भनी राख्यौँ भने यी हाम्रा रहिरहन्छन् । डर के हो भने मधेसीहरू पनि पक्का नेपाली हुने हो भने हाम्रै मान्छे जस्ताहरूबाट सुरक्षा भय हुन सक्छ । त्यही कुरालाई उनीहरूले कहिले आईएसआई, कहिले नक्कली नोट त कहिले मधेसमा धेरै मदरसा खुले भनेर उठाइरहन्छन् । काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ताको डर र लोभको दुवै पाटोका बीच मधेसी पिल्सिए ।
सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो ।
पाहाडमा बस्नेहरूको मानसिकता जसरी विकास गरियो भन्नुभयो, त्यसैगरी मधेसमा बस्नेहरूको पनि मानसिकता विकास गरियो होला ? मधेसमा कस्तो धारणा पाउनुभएको छ ?
मधेसका विषयमा धेरै लेखिएको छैन । पाहाडका बारेमा स्वदेशी, विदेशी धेरैले लेखेका छन् । त्यसैले यसमा आफ्नो अनुभवका आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । म सानो हुँदाबाटै हामी हारेकाहरू हौँ र यो राज्य पाहाडीहरूको हो, ती मालिक हुन् र उनीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइन्थ्यो । भन्नुको अर्थ हामी दोयम दर्जाका नागरिक हौँ भनेर सिकाइन्थ्यो । सन् ७० को दशकपछि नेपालमा आधुनिकताले प्रवेश पायो । त्यहाँबाट होइन मानिस भनेको सबै एउटै हुन् भन्ने धारणा विकसित भयो । एउटै देशमा बसेर, समान कर तिरेर, एउटै कानुन मानेर नागरिक कसरी दुईथरिका हुन् सक्छन् भन्ने भयो । त्यहाँबाट मधेसमा अलिकति असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । जुन असन्तुष्टि नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत अभिव्यक्त भयो । किनभने त्यस ताका मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रभावशाली थियो ।
तर त्यो विचारलाई झनै कडाइका साथ दबाइयो । सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो । यो प्रतिवेदनले नागरिकता नहुने सबै आप्रवासी हुन् भनेर घोषणा गरिदियो । अधिकांश नागरिकसँग मधेसमा नागरिकता नै थिएन ।
त्यसको मधेसमा त्यसको व्यापक विरोध भयो र मधेसका जनताको काङ्ग्रेससँग मोहभङ्ग भयो । त्यसपछि मधेसीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद गठन गरे । यो परिघटनाले भारतलाई लाग्यो मधेस हाम्रो हातबाट फुत्कियो । उता काठमाडौँको राज्यसत्तालाई मधेसको राजनीतिलाई भारतले उचालिरहेको छ भन्ने लाग्न थाल्यो । सन् ८० को मध्यतिर आइपुग्दा मधेस फरक हो र यसको अधिकारका लागि आफै लड्नु पर्छ भन्ने भावना विकसित भयो । त्यसलगत्तै भारतले सन् १९८९ नाकाबन्दी गर्यो । त्यो नाकाबन्दीले मधेसको कार्यसूचीलाई ओझेलमा परिदियो । त्यसलगत्तैको निर्वाचनमा मधेसबाट काङ्ग्रेसले जित्यो र सरकार गठन गर्यो । निर्वाचनसँगै सद्भावना परिषद ओझेलमा पर्यो । तर सत्तामा पुगेको काङ्ग्रेसले मधेसको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेन । किनभने काङ्ग्रेस काठमाडौँ सत्ताको अङ्ग बनिसकेको थियो । त्यसपछि एमालेले मधेसको पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने आश पलायो । तर उसले पनि केही काम गर्न सकेन ।
त्यसपछि माओवादी सशस्त्र विद्रोह नै हो, जसले मधेसमा निकै ठूलो आशा जगायो । किनभने माओवादीले नागरिकताको मुद्दा, दलितको मुद्दा, महिलाको मुद्दाहरू उठाएको थियो । अन्तरिम संविधान लागू हुँदासम्म त्यसको एउटा पक्ष माओवादी थियो । तर मधेसको अधिकारको पक्षमा माओवादी कहीँ पनि अडिएन । अनि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह भयो । समस्या के भयो भने मधेसमा पहिलो मधेस विद्रोह चल्दै गर्दा माओवादी निकै सशक्त थियो । त्यसकारण काठमाडौँको सत्ताले उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गर्न सके माओवादीलाई मधेसमा रोक्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइका कारण त्यसलाई मलजल गर्न पुगे । सँगसँगै त्यसलाई भारतीय समर्थन पनि प्राप्त भयो । यी सबै उतार–चढावले गर्दा मधेसको मुद्दा स्थापित त भयो तर त्यसले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
पटक पटकका आन्दोलनले पुरानो मानसिकतामा के कति परिवर्तन ल्याए होलान् ?
मधेसमा देखिएको मुख्य परिवर्तन भनेको के हो भने सजिलै अधिकार पाइनेवाला छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले युद्ध लडेको हो । त्यसका नेता ३० वर्षसम्म निर्वासनमा बसेका हुन् । एमालेले टाउको काट्दै हिँडेको हो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसको दममा उनीहरू स्थापित भएका हुन् । बिना सङ्घर्ष सम्झौताको आधारमा समानताको अधिकार त पाइदैन भन्ने स्थापित भएको छ । मुद्दा कहिले ओझेलमा पर्छ कहिले अगाडि आउँछ । तर सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ । मधेस सङ्घर्षको यो एक सय वर्षमा पहिलो पटक हो, जति बेला उनीहरूले आन्दोलनबाट पाएको कुरा खोसिएको छ । त्यसकारण अहिले निराशा, वितृष्णा अलिक बढी छ । तर मुद्दाका हिसाबले आन्दोलन अगाडि नै बढेको छ ।
काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो ।
मधेसमा भएका आन्दोलन, काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ता स्वार्थबीच मधेसको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो । मोदीले यो वाक्य त्यसै प्रयोग गरेका थिएनन् । पानी भनेको नेपालका नदी हुन र जवानी भनेको नेपालको गोर्खा भर्ती हो । मधेसलाई उसले एउटा कार्डभन्दा बढी कहिलै पनि ठान्दैन ।
काठमाडौँसँग भारतलाई केही चाहिँदा र उसले आनाकानी गर्दा त्यो ‘मधेस कार्ड’ भारतले मज्जैले प्रयोग गर्ला नि होइन ?
दिल्लीले त्यो कोशिस प्रत्येक पटक गरेको छ । जस्तो कि सन् १९८९ को नाकाबन्दीमा भारतलाई मधेसले हाम्रो पक्षमा बोल्नेछ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर मधेस बोलेन । उसले काङ्ग्रेसलाई साथ दियो । त्यतिबेला काङ्ग्रेसले यसपालि न्याय हुन्छ भनेकै आधारमा भारतको पक्षमा मधेसमा एउटा कुकुर पनि भुकेन । तर सन् २०१५ सम्म आई पुग्दा भारतको रणनीति केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । जस्तो कि नाकाकसीको नैतिक जिम्मेवारी मधेसीले लिइदिएका हुन् । भन्नुको अर्थ भारतलाई सन् १९८९ मा जस्तो सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत हुनुपरेन । अहिले त झनै के भयो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कमजोरको पक्ष लिएको जसरी उसको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झनै राम्रो छवि निर्माण भयो । यसको अर्थ मधेसीले मोदीको नाक जोगाइदिए ।
मधेसमा चीनको झण्डा जलाउने र भारतको झण्डा गर्वका साथ फहर्याउने मानसिकताको विकास कसरी गरियो होला ?
भारत–पाकिस्तानको म्याच हुँदा पाहाडमा पाकिस्तानको झण्डा देखाउनेदेखि अधिकांश खस–आर्यहरू किन पाकिस्तानको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने ख्याल गर्नु भएको छ ? किनभने पाहाडमा भारत विरोधी भावना बलियो छ । यसको विपरित मधेसमा नातागोता, दाजुभाई र वारीपारीको सम्बन्धले पनि भारतको पक्षमा बन्धुत्व भाव छ । तर यसको अर्थ त्यो राजनीतिमा पनि कायम हुन्छ भन्ने छैन । तर एउटा कुरा पक्का हो, जसमा दास मानसिकता हुन्छ उसमा धार्मिक भावना अलिक बढी हुन्छ । किनभने उसले मुक्तीको अरु बाटो देखेको हुँदैन । पाहाडका लागि धेरै विकल्प छन् जुन मधेसका लागि खुला छैनन् । हिन्दीमा एउटा भनाई छ– ‘डुबते को तीनके का साहारा’ । मधेसीलाई भारतले साथ दिँदैनन भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसको पछाडि लाग्न बाध्य छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’को नाम दिएर विशिष्ट सम्बन्धको रूपमा अर्थाउने गरिन्छ । दुई राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यसरी अर्थ लगाउनु सही हो ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणा र शाहहरूले भारतका राजा–रजौटाहरूसँग बिहे गर्ने चलन छ । राणाहरूले भारतको राजपुतसँग बिहे गर्थे तर नेपालको राजपुतसँग गर्दैनथे । किनभने रैतीसँग बिहे सम्बन्ध गाँस्ने कुरा भएन । त्यसैगरी मधेसमा पनि बिहे गरेर दिने र बिहे गरेर ल्याउने प्रचलन रहेको छ । त्यसैले यो परम्परा मधेस र पाहाड दुवैमा रहेको छ । मधेसमा चाहिँ अलिक बढी थियो । नेपाल–भारतसम्बन्धमा बेटीको सम्बन्ध यही हो । रोटीको सम्बन्ध कहाँबाट जोडिएको छ भने पहिले पहिले चौगामा भोज भन्ने गरिन्थ्यो । चौगामा भोज भनेको चार गाउँको भोज भनेको हो । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुनै अर्थ हुँदैन्थ्यो । आजको सन्दर्भमा यो दुवै कुरा कमजोर भएर गएका छन् । भन्नुको अर्थ रोटी–बेटीको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ ।
फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र < फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो ।
मधेसमा उठेको नागरिकताको विषयलाई काठमाडौँमा ‘फिजीकरण’ र ‘सिक्किमीकरण’का रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जुन भारतको जनसङ्ख्याको अगाडि चिन्ताजनक नै लाग्छ । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?
यो सोझै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको हो । मधेसको नागरिकताको विषय काठमाडौँको स्थायी सत्ताका लागि एटीएम कार्ड हो । जति पटक सीडीओ र अञ्चलाधीश फेरिए त्यति पटक नागरिकता बनाउनुपर्ने । कहिले कसको नक्कली त कहिले कसको नक्कली । बनाई दिने को हो भन्ने बारेमा कुनै सोध खोज छैन । यो विभिन्न बाहानामा पैसा असुली गर्ने माध्यम बनेको छ । नेपालको नागरिकता लिनु अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पाउनुभन्दा गारो छ । तपाईं आफै भन्नुस कसैले ग्रिन कार्ड छोडेर नेपालमा बस्न आउला ? तपाईंलाई अझै पनि लाग्छ कि बङ्गाली, बिहारी, सिक्किमेली, गढवाली अथवा उत्तराखण्डी आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउलान् ? आजको समयमा संसारको सबैभन्दा धेरै विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्येको भारतबाट संसारको १० सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्येको एक नेपालमा कोही आउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र ? भारतले बरु बङ्गालदेश बनाई दिएको छ । श्रीलङ्का जोगाइ दिएको छ । फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो । यस्ता मनोगत कुरा उठाएर जनसमूहलाई दास बनाई राख्ने यो भ्रम प्रचार हो ।
मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु, सीके राउतका समर्थक बढ्दै जानु साथै उनले सशस्त्र युद्ध होइन कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्ने कुरा गर्नुले मधेसको भावि राजनीतिलाई कतातर्फ डोर्याउला ? तपार्इंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सीके राउतको अडान सैद्धान्तिक अडान हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा ४५ देश थिए । पछि ६० भए र अहिले २ सयको हाराहारीमा छन् । ४५ बाट २ सय राष्ट्रहरू बन्ने प्रक्रिया मङ्गलग्रहबाट झरेर बनेको होइन । यहीँका देशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर देश बनेका हुन् । राष्ट्रको निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका केही आधार हुन्छन् । जस्तै, पहिलो, केन्द्र निकै कमजोर भयो भने त्यहाँबाट छुट्टिने रहर जाग्छ । दोस्रो, शोषण बढ्यो भने छुट्टिने रहर जाग्छ । (उदाहरणको रूपमा बङ्गालादेश । पाकिस्तानको शोषणले सीमा नाघेपछि बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र हुने बाध्यता जाग्यो ।) तेस्रो, नागरिकलाई सम्मान र समान व्यवहार गरिएन भने छुट्टिने रहर जाग्छ । चौथो, व्यक्तिको महत्वकाङ्क्षाले पनि राष्ट्रको भूगोल बदलिन्छ । जसरी जिन्नाले विश्व मानचित्रमा पाकिस्तान भन्ने देश थपे ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मधेसको नेपाल राज्यसँग छुट्टिने लगभग सबै कारण विद्यमान छन् । दमनले सीमा नाघेको छ । मधेसीको सम्मान स्थापित छैन । मधेसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केन्द्र निकै कमजोर छ । जसले न मधेसीको सुरक्षा गर्छ न सेवा दिन्छ । साधन, स्रोत र सत्तामाथि खसआर्यको एकाधिकार रहँदै आएको छ । तर पनि मधेसलाई स्वतन्त्र हुन नदिने तीन कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वको कमी । सीके राउतमा मोहम्मद अलि जिन्नाको जति लौह निश्चय देखिँदैन । दोस्रो, भूराजनीति । कुनै पनि राष्ट्र स्वतन्त्र हुनका लागि भूराजनीति निर्णायक हुन्छ । भारतले चाह्यो बङ्गालदेश बन्यो । भारतले चाहेन तमिल इलम बनेन । अस्टे«लियाले चाह्यो इस्टटिमोर छुट्टियो तर कसैले पनि साथ दिएनन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स यथावत छन् । बेलायतले चाह्यो मलेसियाबाट शन्तिपूर्ण ढङ्गले सिङ्गापुर निस्कियो । तर त्यस्तै अवस्था बेलायत, इटली अथवा जर्मनीमा हुँदाहुँदै पनि सम्भव देखिएको छैन ।
त्यसैले मधेसको पक्षमा भूराजनीति छैन । भारत आफ्नो दुइटा मुटु उत्तरप्रदेश र बङ्गाल नजिकै छुट्टै देश चाहँदैन । ऊ आफूप्रति निकै बफादार सेना गोर्खाली पल्टनमा टाउको दुखाइ चाहँदैन । त्यसैले भारत स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा हुँदैन । चीन पनि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा छैन । पश्चिमाहरूको सोझो कुरा छ । जे कुरा भारत र चीन चाहँदैनन्, उनीहरू पनि त्यो कुरा चाहँदैनन् । तेस्रो, आर्थिक स्रोत । मधेस राष्ट्र हुनका लागि त्यसको बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । मधेसमा इराकको जस्तो तेल अथवा सेरालियोनको जस्तो हीराको खानी भएको भए अमेरिकीहरूले उहिलै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाई दिइसकेका हुन्थे । किनभने मधेसलाई नेपाल राज्यसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सेना, प्रहरी, प्रशासन, सत्ता, मिडिया कहीँ पनि उनका आफ्ना मान्छे छैनन् । हरेक दृष्टिकोणले मधेसको नेपालसँग न अपनत्व छ, न यो राष्ट्रसँग ममत्व छ । मात्र एउटा दासले मालिकप्रति देखाउनुपर्ने समपर्ण भावबाहेक केही छैन ।
अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे ।
आजको विश्वका पुँजीवादीहरू नफासहितको स्वतन्त्रतामा लगानी गर्छन् तर नाफा नआउने ठाउँमा चाँसो समेत गर्दैनन् । त्यसैले विश्व पुँजीवादलाई पनि मधेसको स्वतन्त्रतामा रुचि छैन । यी सबै कुराबाट मधेसका अगाडि अमेरिकी अर्थशास्त्रीले भनेझै तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सत्तासँग बफादारी देखाउने । बफादारीता देखाए बापत दुई छाक खान कुकुरले पनि पाउँछ, मधेसीले पनि पाउँछन् । दोस्रो, एक्जिट हो । बाहिर निस्कने । धेरै मधेसी यो प्रक्रियामा दिक्क मानेर विदेशिएका छन् । तेस्रो, आवाज बलियो पार्ने । आवाज बुलन्द गर्ने काम विगत एक सय वर्षदेखि चलिआएको छ । तर पटक पटक यसलाई दबाउने काम भइआएको छ । यस पटक पनि मधेसी जनताको आवाज दबाइएको छ । तर आवाज बुलन्द गर्ने काम जनताको उनीहरू आवाज बुलन्द गरिरहन्छन् । यी तीन विकल्पमध्ये कुनैले काम गरेन भने अन्तिम विकल्प भनेको विद्रोह हो । जुन विद्रोहको बाटोमा डा. सीके राउत हिँड्दै छन् । रह्यो शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र भन्ने कुरा त्यो त उपाय मात्र हो । यदि उद्देश्य विद्रोह हो भने उपाय परिस्थितिले जन्माउँछ ।
जसरी मधेस आन्दोलनका आयाम अगाडि आउँदै छन्, तिनको सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?
अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे । यो घटनाले केन्द्रमा र मधेसमा कसैलाई पनि नाङ्गिनबाट बचाउन सकेन । यसले मधेसीको घाउमा नुन–चुक दल्ने काम भएको छ । यसले घाउ झनै बल्झिने हो । अझै पनि मधेसको मूल मुद्दा नागरिकता, भाषाको सम्मान र प्रतिनिधित्व नै हो । यो कुरा पुरा नभएसम्म यो चरणको आन्दोलनले सही निकास पाउँदैन ।
July 21, 2019, 9:32 a.m. suraj
धोति तेरो दिमाग सकियछ है , भारतिय दलाल
May 16, 2019, 2:35 p.m. Pradip yadav
Right kura ho ck lal ko hami sabai madhesi sahamat chai
Sept. 7, 2017,2p.m. Desert
After debacle of maoist insurgency, this nation has turned dead in the water due to over politics in all aspect of life. Each and everyone has right to express his opinion but there has to beanorm that limits harm to nationhood. If Nepal does not chart it's wellbeing in hurry, madhesi, limbuwan etc., are just tip of accidents waiting to happen with grave consequences.
Sept. 6, 2017, 8:51 p.m. G J
If CKBLal's argument holds water, then Kumaon, Garwhal and Sikkim do NOT need to stay with India also.
Sept. 6, 2017, 1:07 p.m. देवराज जोशी, कैलाली
होइन यी लालजी कस्ता विद्वानहुन मधेसको फिजीकरण भयो पो भन्छन बा! मधेस पहाड एउटै देश भए पछि मानिसहरुको बसाइसराइ हुनु स्वाभाविक होइनर? पहाडका मान्छे मधेसमा छन मधेसका पनि त पहाडमा सरेका छन नि देश भित्र यस्तो बसाइ सराइ गर्न कनै भिसा लिइरहनु पर्दैन, संसारमा कहीं यस्तो हुँदैन | जहाँ सम्म फिजीकरणको प्रश्न छ त्यो सायद भारतीय , प्रभाव संस्कृति तथा मानिसहरु बढ्दै जाँदा मौलिक नेपालीपन को क्षयहुनेहोकि भन्ने आशंका लाइ भन्ने गरिएको हो तर मलाइ अहिलेको भूमंडलीकरणको जमानामा त्यति तार्किक लाग्दैन, अमेरिकामा पनि बढ्दो एशियालीहरु संख्याले यस्तै आशंका जन्माएको देखिन्छ त्यहाँका गोरा जातिमा |